Finfinneetti wallaansi fayyaa bilisaa jiraattoota daandiirraaf kennamaa jira - BBC News Afaan Oromoo
Finfinneetti wallaansi fayyaa bilisaa jiraattoota daandiirraaf kennamaa jira
Image copyright Mesfin Getachew
Goodayyaa suuraa Tajaajilli wallaansichaa konkolataa socho'uun kennameera
Duulli tajaajila wallaansa fayyaa lammiilee daandiirra jiraataniif dubartoota mana bunaa hojjatanii kennamu kaleessa magaalaa Finfinnee bakkeewwan afuriitti ta'uu barameera.
Dirree Masqalaa, Istaadiyoomii ykn Lagahaar akka tokkootti, Meeksikoo, Ameerikaa Gibbii fi naannoo Magalaanyaatti tajaajilichi kennamusaa Dr Mitiku Gexuu hospitaala Phaawulos irraa mirkaneessara.
Walumaagalattis, hospitaala Phawulos, Zawdituu, Minilik, Amaanu'eel fi Yekaatiit irraa hakiimoonni, hojjattoonni laaboraatoriifi narsoonni hedduun walitti babahuun tajaajilicha irratti hirmaachuusaani barameera.
Musxafaa Omar pirezidantii naannoo Somaalee ta'an
Tajaajilamtoota keessaa tokko Dureessaa Shikur jedhama. Dhalatee kan guddate magaalaa Shaashamanneetti yoo ta'u, ammaan tanas Magaalaa Finfinnee naannoo Istaadiyoom daandiirra jiraata.
Achumaan ijoollee waliin osoon karaa Booleetii dhufaa jiruun namoonni mana wallaanan jiru. Dhaqiitii mila su dhukkubuuf wallaanamii naan jechuun attamiin gara wallaansa bilisaa akka dhufe Dureessaan BBC'tti kan hime.
Duula tajaajila wallaansaa taasifameenis miila isaafi dhukkuubbii qonqootiif wallaanamu himeera. Kana dura tajaajilli bilisaa jiraachuu hinbeeku ture. Hakiimoota isa wallaananis galatoomaa jedheera.
Warra dhukkuubbii cimaa qaban ammoo waa'ee rakkina fayyaa gaafachuun kaardii erga baasuuniif booda gara Phaawuloos, Raas Dastaa ykn Miniliik deemuun bilisaan wallaanamu akka danda'an itti himamusaan ni dubbata.
Hakiimoota wallaansa bilisaa jiraattoota daandiirraatiif taasisan keessaa tokko Dr Maahileet Birhaanu tokko.
Isheenis kan hojjattu hospitaala Phaawulos irraa yoo ta'u, hakiimoota biraa 10 waliin tajaajila bilisaa kana keennuuf naannoo Istaadiyoomitti argamu BBC'tti himte jirti.
Kana malees hojjattoota laaboraatoriifi narsoota biraa waliin hojii kana hojjachaa akka jiran kan himte Dr Maahileet, hakimiin tokkoos yoo xinnaate dhukkubsattoota hanga kudhanii wallaanuuf karoora qabaachu himti.
Walumaa galatti dhukkubsattoota dhiibbaa oliitiif guyyaa tokkootti tajaajila kennuuf qophaa'us himte jirti.
Sochiin kunis maaliif akka eegalame yoo himtuus, ''Obbooleeyyan keenya daandirra jiraatan carraan isaan akka qaamoole hawaasa biraatti gara dhaabbilee fayyaa deemuun tajaajila wallaansaa argachuuf qaban gadaanaa ta'uunsaa sababa tokko,'' jettee jirti.
'Qufaaf jalqaba damma fayyadamaa'
Kanaafuu, dhaabbilee fayyaa motummaa bilisaan isaaniif tajaajila akka kennan itti himuun, akkasumas nutis asiitti argamuun isaan tajaajiluuf fedhii qabaachuu keenya itti himuun gara fuula duraatti akka wallaanamiif kakaasuufi amansiisuuf dhufuusaanii dubbatti.
Walumaa galattis gareen wallaansaa kun tajaajila yeroo tokkichaa qofa kennuun deebi'uuf qofa osoo hintaane, gara fuula duraattis dhukkubbiin yoo itti dhagahamu battalatti gara dhaabbata fayyaa dhiheenya isaaniitti argamu deemuun akka wallaanaman itti himuuf dhufnees jettee jirti.
Namoota duula wallaansa jiraattoota daandii irraa keessatti qooda fudhatan keessatti artistoonni ni argamu.
Artisiti Darajja Arayaa daarektara diraamaa Zaman jedhamu lammiileen daandiirra jiraatan akka gara buufataalee fayyaa deemuun wallaansa argataniif dadammaqsuuf achitti argamu dubbata.
Goodayyaa suuraa Kaardiin wallaansaa bilisaan tajaajila ittiin arganta kemmaneefiira
Akka Darajjan jedhutti jiraattoonni kunneen jalqaba waa'een tajaajila bilisaa kun yoo itti himamu akka waan walitti isaan qabuun hidhuu ykn gara biraatti geessu itti fakkaate ture. Kanaafu isaan amansiisuun salphaa hinturre jedheera.
Walumaagalattis Magaalaa Finfinneetti jiraattoota daandiirraa 1000'f kaardiin qophaa'eera.
Kaardii kanaanis wallaansa bilisaa qofa osoo hintaane qorichalleen bilisaan ittiin argatu.
Duula tajaajila wallaansaa kaleessa Hagayya 22 bara 2018 magaalaa finfinneetti gageefamee keessattis dubartoonni mana bunaa hojjatan hammataniiru.
Haaluma kanaanis hanga alkan waldhakkaatti konkolaataa socho'uun bakkuma jiraniitti tajaajila akka argatan taasifameera.
Hanqinni meeshaalee wal'aansa fayyaa Jigjigaatti rakkoo ta'e
Fayyaa: Bu'aa sochiin qaamaa idilee fayyaa sammuuf qabu
'Namoonni Gujiitti ajjeefaman hidhattoota' - aanga'aa Gujii
Sabboonummaa Oromoofi Itoophiyaa haaraa ijaaruu
Bulchiinsi US reeffa namaa kompostii gochuu eeyyamte
Oomishtoonni qophee taarifa US Chaayinaarra keesse komatan
Obbolaawwan paartilee Tigiraayiifi Eritiraa araarsuuf socho'an